Candy "Raffaello" ukupheka ekhaya
Lokhu amaswidi ezikhethekile. Nikeza ibha ushokoledi akuyona njalo okuqinile, futhi ibhokisi loshokoledi for the holiday noma ukwazisa inkonzo akusona isimanga. A "Raffaello" - uyisipho ephelele. yokuthengisa zabo ezitolo lenyuke kakhulu unyaka ngamunye ngo-March 8, futhi-14 Februwari futhi wamukele isipho esifakwe ebhokisini ukuze sijabule, ngisho nalabo ungathandi ushokoledi, futhi kuyaqabukela badle ngaphandle "Raffaello" amaswidi. Intengo yalezi amaswidi ingaphezu kwe kweminye imikhiqizo yenziwe ngohlobo olufanayo. Kufanele overpay zomkhiqizo, futhi ukunambitha imangalisa ngempela. Ngakho masizame ukupheka candy "Rafaello" ikhaya.
Yasungulwa izindlela eziningana, okuyinto ezimweni izitsha bomdabu ungenza candy akho "Rafaello". Manje sihlaziya umuntu elikuvumela ukuba uthole esiseduzane ukunambitheka yokuqala.
1 Tile ushokoledi esimhlophe;
60 ml ukhilimu, lokucuketfwe fat hhayi ngaphansi kuka-33%;
25 g le-bhotela;
75 g kakhukhunathi;
amantongomane lonke alimondi;
Izingcezu ushokoledi ne ukhilimu ukuxuba futhi shisisa ngxube okugeza amanzi (iyatholakala microwaved). Linda kuze kube yilapho ushokoledi uncibilike, futhi ake thumba ukhilimu.
Cool egumbini lokushisa, engeza ibhotela 3-4 wezipuni kakhukhunathi shavings.
Hlanganisa konke bese efakwa efrijini kwamahora ambalwa. Ukuze candy "Rafaello" Kwatholakala, ingxube kufanele kube kahle cool.
Susa kusuka imbala ingxube kufanele beat nge mixer, ngakho-ke kuyoba emoyeni futhi kancane mkhulu. Ungaqala yokumodela.
Thatha prepurified futhi ethosiwe kuze omnandi isimo alimondi, amathisipuni amabili nezihlahla zikakhukhunathi. shavings Vuvuzela esosweni. Ngosizo ithisipuni elilodwa ukhilimu Ukudayela ezimhlophe, siphethe yesibili - perekin'te ku chips. Beka ukhilimu i nut alimondi bese bakha ibhola futhi nge nezinkezo. ibhola Boned in kakhukhunathi ishq.
Ungazami ukwenza ezinkulu usayizi candy. Small kukhona okuningi elula kakhudlwana.
Yilokho candy okuzenzela "Rafaello" ukulungele! umehluko yabo kuphela kulokho eqale iyikho wukuthi emhlabeni-nucleus ye-ayisikhilimu alimondi futhi akukho ibhola waffle. Kodwa lokhu akuphazamisi ukunambitheka, kodwa candy kancane kancane ezinoshukela.
Lesi sidlo kungaba hit etafuleni zemikhosi. Kodwa uma uya ukwethula amaswidi njengesipho, kungcono ukuthatha candy wakuqala wrappers. Isipho ukubheka umbukwane, wenze kweqembu candy "Rafaello".
Ukuze ukukhiqizwa kwayo kudingeka wire ezimibalabala, iphepha lukathayela, Cellophane ukugoqa, isiqophamazwi sokulalela, iglu isibhamu futhi kancane amehlo akho engqondo. Ungakwazi ukwengeza ezinye candy isixha, isibonelo, zihambisana ucwecwe ushokoledi izinhliziyo.
Thatha "Raffaello" ecacile plastic ukugoqa. wrapper kancane nadorvite ngakolunye uhlangothi, ukusebenzisa hot ncibilikisa glue bese ufaka isihloko wire. Ukugoqa uswidi kusuka gofrobumagi isikwele, lona uhlobo "insimbi" futhi uvikelekile nge glue uma kunesidingo. Khona-ke qedani e Cellophane, esakaza it emhlabeni ihlumela emphethweni ububanzi. Tie umdweshu phezulu.
Ukuqoqa yomuntu "zimbali" isixha, okwenezela ubukhazikhazi phakathi izimbali nge ezidliwayo core kancane awunalutho. Ukugoqa kweqembu iphepha lukathayela bese Cellophane, ubophele uvalwe nge tape. Isipho ngomumo.
Indlela Pheka roll nge banana: zokupheka best
Glow ku donuts amnyama edliwayo
Nougat - European Christmas iresiphi
Lashizi: Kuyini imithetho kanye zokupheka
Strawberry tiramisu: iresiphi izithako
Ikhukhamba ikhekhe, i-squash pancake: iresiphi esheshayo
Injani kokuzalela lezimpongo, na? Izici Ezihilelekile Kule nqubo, namathiphu eziwusizo
Pear "Muscovite": incazelo ezihlukahlukene, ukutshalwa kanye nokugcinwa
Sony Ericsson WT19I: izici firmware
Ngayiphi yasebhange ungathola ukuhunyushwa "Contact"? Amathiphu nemibandela ukudluliswa
Usuku lokuzalwa izipho intombi: yini ukukhetha?
Ethandwa kakhulu izilimi izinhlelo. Awezilimi Wabasaqalayo
Amathiphu ambalwa sendlela bokhela namalahle for izoso
Zezinwele Khanyisa ngezandla Amathiphu kwansuku
Yini udokotela ephatha varicose emithanjeni? Doctor ku emithanjeni